3 Tilmaamood oo ku Saabsan Abuurista Email-Diyaar Ah | Martech Zone
Kahor intaadan bilaabin go'aaminta sida loo abuuro emayl ku habboon moobiilku, waa inaad isweydiisaa "Maxay yihiin kuwa kuu soo diraya si ay u eegaan emaylkaaga?" haddii aad go'aansato in loo baahan yahay emayl filaayo in moobiilku shaqeynayo, ka dibna waa waqtigii la bilaabi lahaa ka fiirsashada sida loo sameeyo abuuritaankeeda.
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha lagu abuurayo emayllada diyaarka u ah ololeyaasha emaylkaaga.
1. Khadadka Mawduuca.
Qalabka mobilada waxay u egyihiin inay yareeyaan khadadka maaddada emaylka oo gaaban illaa 15 xaraf. Dhab ahaantii la soco tan markii aad u abuureysid khadadkaas maadooyinka xiisaha leh ee akhristayaasha.
2. Emailka Layout.
Si la mid ah qaabeynta emayllada, qaabeynta emaylka moobiilka waxay soo jiidan kartaa dhowr waxyaalood oo kala duwan - oo dhan laga bilaabo cabirka illaa xiriiriyeyaasha Shaashadda qalabka mobilada ayaa si cad u yar, markaa tixgeli taas markaad abuureyso emaylkaaga. Go'aamso haddii sawirradu si fiican uga soo bixi doonaan dhammaan qalabka moobiilka. Haddii kale, laga yaabee inaad kudarsato qoraal badan. Iyo dabcan, xusuusnow: faraha dufanka leh ee taleefannada yaryar, markaad abuureyso badhanno iyo xiriiriyeyaal!
3. Tijaabi, imtixaan, imtixaan!
Waxaan ku adkeyneynaa qodobkaan markasta markaan kahadleyno dhaqamada suuqgeynta emailka ugu fiican si kasta, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan sii wadno dhaqankan wanaagsan haddii aan sidoo kale abuurno emayllo mobile-diyaar u ah sidoo kale. Ka hor intaadan u dirin macaamiisha, hubi inaad tijaabisay emaylkaaga si aad u hubiso inay si fiican u bixinayso.
Tags: OlolayaashaContent SuuqemailSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkakhadadka maadadaimtixaanka
Febraayo 20, 2012 saacadu markay tahay 11: 17 AM
Waxaan ogaaday in taleefannada casriga ahi badankood ku soo jiidan doonaan nuxurka illaa inta si sax ah loo qaabeeyey - marka laga hadlayo emaylka, waxaan u malaynayaa in tan lagu dhammaystiray miisas iyo tiirar. Haddii jirka emaylkaagu ku jiro hal khaan oo dhinaca kale ee dhinaca kale, waxay umuuqataa inay sifiican u soo dhaweynayso haddii aad laba-labbaarto shaashaddaada si aad u dhaweyso. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood fontku aad ayuu ugu yar yahay emayllada qaarkood, ma caawinayso. Hayso farbarashadaada cabir wanaagsan oo u qaabee boggaaga iimaylka ugu fiican!
Febraayo 20, 2012 saacadu markay tahay 11: 20 AM
Waligaa ha noqonin qof jecel akhriska ama kajawaabida emaylka taleefoonka 😉 adigoo u maleynaya in waxyaabaha qaar ay uqalmayaan wax u eg kumbuyuutar sida mararka qaarkood u qalmaan wicitaan taleefan, halkii aad ka heli lahayd emayl.
Febraayo 20, 2012 saacadu markay tahay 11: 24 AM
Si daacad ah uma ogi haddii aan waligay maamuli karo mugga emaylka aan helo aniga oo aan dib u eegin oo aan ku shaandhayn taleefanka.
Feb 23, 2012 markay ahayd 11:21 PM
In kastoo aysan daruuri noqon karin dhinaca abuurka, waxaan ku dari lahaa… cabir, cabbira, cabbira! Cabir ololahaaga oo A / B ku tijaabi si aad u aragto sida ay wax u wadaan isla markaana u wanaaji emayl kasta oo soo socda ka soo horjeedka waxa ay kuu sheegayaan.
Qaar ka mid ah talooyin fiican halkan…
Waxaan u maleynayaa inay muhiim u tahay suuqleyda inay dhab ka tahay socodsiinta ololeyaasha guuleysta si aysan u iska indha tirin barnaamijka moobiilka.
In ka badan abid, dadku way socdaan oo waxay ku sii cusboonaysiinayaan taleefannadooda casriga ah.
Guud ahaan, waxaa jira qalab aad u fiican oo lagu hagaajin karo emaylka, sidoo kale.
Mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay waa aalad (bilaash ah) oo la yiraahdo XmailWrite. Waxaan dhawaan sameeyay qoraal ku saabsan, taas oo laga yaabo inay ka faa'iideysato naftaada ama dadka kale ee dhacaya.
Waa kuwan iskuxirka fiidiyowga / fiidiyowga: http://www.multiplestreammktg.com/blog/your-new-secret-weapon-for-writing-e-mails/
Maareeyaha Suuq geynta